Iron Man3 Game ကို Hack မယ် ~ မိုးညိုသား
Iron Man3 Game ကို Hack မယ်
3:30 AM IOS Game2comments
မင်္ဂလာပါဗျာ ဒီတစ်ခါ IOS သမားများအတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေး တစ်ခုပေးချင်ပါတယ်ဗျာ။ ယနေ့နာမည်ကြီး ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Iron Man3 ဂိမ်းကို Diamond တွေအများကြီးရအောင်လုပ်တဲ့ နည်းလမ်း
တစ်ခုပါ၊ ဒါမှလည်း စက်ရုပ်တွေအများကြီး တောက်လို့ရမှာပါ။ ဒီနည်းလမ်းလေးကနဲနဲတော့လက်ဝင်ပါတယ်. ဒီနည်းလမ်းလေးကို အသုံးပြုဖို့အတွက် သင့်ရဲ့ drive ဟာ Jail break လုပ်ထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်. ကဲစလိုက်ရအောင်.
ပထမဆုံးအနေနဲ့ cydia ထဲမှာ Flex ဆိုတဲ့ tweak ကိုရှာပြီးတော့ install လုပ်လိုက်ပါ( twaek ရှာမရပါက http://cydia.xsellize.com ကို အက်ပြီးတော့ရှာပါ။
ပြီးသွားရင် Home မှာ FLEX ဆိုတဲ့ Icon လေးရောက်နေပါပြီ.. Icon ကိုနှိပ်လိုက်ပါ.
Flex ရဲ့ အပေါ်ဆုံးညာဘက်ထောင့်ကလေးမှာ (+)အပေါင်း လက္ခဏာ ပုံစံလေးရှိပါတယ်. အဲဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ Choose App မှ Iron Man3 ကိ်ုရွေးပေးလိုက်ပါ. Patch Editor ကိုရောက်ပါပြီ။
ပြီးရင် Add Units ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ပြီးရင် Executable အောက်က Iron Man3 ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ.။ သူက Unprocessed လို့ ဆိုပြီးဘောက်စ် တစ်ခုကျလာပါလိမ့်မယ် Process ကိုပဲရွေးပေးလိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ Iron Man3 ရဲ့ဘေးလေးမှာ မျှားလေးပေါ်နေပါပြီ. မြှားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့သွားလိုက်ပါ
ဒီနေရာမှာတော့ နဲနဲဂရုစိုက်ပါ.. စာရေးလို့ရတဲ့ Search Box ကလေးရှိပါတယ်အဲနေရာမှာ currentBalance လို့ရေးလိုက်ပါ class နှစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ် နှစ်ခုစလုံးကို နှိပ်ပြီးတော့ အမှန်ခြစ်ကလေးတွေပေးလိုက်
ပြီးရင် box မှာပဲ decreaseBalance ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါ class နှစ်ခုပေါ်လာပါမယ် အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်
box မှာ နောက်တစ်ခါ IncreaseBalance ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါ class နှစ်ကြောင်းထပ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်
အမှန်ခြစ်ကလေးပေးလိုက်ပါ. ပြီးတာနဲ့ နောက်ကို Add Unit ဆိုတဲ့စာမျက်နှာ အထိပြန်ဆုတ်ပါ..
ပြီးသွားပြီဆိုရင် add unit ရဲ့အောက်မှာ Unit For DecreaseBalance စသဖြင့် စာကြောင်း ၇ကြောင်းရှိပါတယ် တစ်ခုချင်းစီဝင်ပြီးတော့ Override Return Value ဆိုတဲ့ နေရာက (0) သုညပြနေတဲ့နေရာကိ်ုနှိပ်ပြီးတော့ ကိုယ်ကြိုက်သလောက် ကဏန်းကိုရေးပါကျွန်တ်ာကတော့ 999999999 ရေးပါတယ် ပြီးရင် done ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ. အားလုံး7ကြောင်းလုံးရေးရမှာပါ. ပြီးသွားရင်တော့ ပြန်ထွက်လိုက်ပါ
ကဲအခုဆိုရင်တော့ Iron Man3 ဂိမ်းက်ို hack လို့ပြီးပါပြီ။ သင့်ရဲ့ drive မှ Iron Man3 ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ မြောက်များစွာသော Diamond တွေရောက်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်.. ကြိုက်သလောက်ဝယ်ပြီးတော့ upgrad လုပ်နိုင်ပါပြီဗျာ အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ.
အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ ပြထားပါတယ် ကြည့်လုပ်လိုက်ပါ.ဗျာ
Iron Man3 ဒေါင်းရန်>>> Download Iron Man31.0 official ipa
ဒီပို့စ်လေးကို သင်ကျေနပ်တယ်ဆိုရင် ကျေးဇူးပြု၍ Comment ပေးခဲ့ပါအုံးဗျာ
မိုးညိုသား June 5, 2013 at 11:24 AM
ဟဟဟဟ ကူးစေဗျာေိေိ နောက်တယ်